Ukuthakazelisa, namahloni, okubuthakathaka ngaphandle, kodwa okufisa kakhulu. Bafuna izihloko ezithandekayo, kodwa akukho muntu owehlukile kubo. Ama-pisces ayaphakamisa futhi azwelana, ngokuvamile awazi ukuthi angasho kanjani ukuthi "cha". Kodwa bavame ukuvumela inkungu futhi baziphathe ngendlela eguquguqukayo, behamba ngezindlela ezihlukahlukene. Lezi zintandokazi zothando ziyakwazi ukuzizungezela njengabangane emoyeni, nabalondolozi, abanikazi abaqinile. Yini elindele abameleli bale watermark ngo-2014?
Uzokhetha ngecebo lakhe ikhono lokuzivumelanisa nezimo, ukuthembela ekufundeni.
Izwi langaphakathi namaphupho kuzoba abeluleki abangcono kakhulu kunengqondo. Ukukhuphuka kweNode kuzokukhuthaza ukuba useshe izindlela ezingavunyelwe zokuxazulula izinkinga, izenzo ezinesibindi kanye noshintsho lombono womhlaba. I-Saturn izokunika ngokuzikhandla, ukufisa isifiso nokusiza ukuthuthukisa izinga lobuchwepheshe. Uzokufundisa ukulungiselela ngokucophelela uhambo olude, uzothola kuwe izimangaliso zokubona kwangaphambili. Kusukela ngoMashi kuya kuJulayi kuzodingeka ulalele umbono womunye umuntu. Esikhathini sokuqala, ngaphansi kwethonya likaJupiter, uzokwazi ukukhombisa amakhono akho okudala emazingeni ahlukene, futhi ubuciko nokudlala kuzokusiza ukuba uzuze ukuzwelana kwabanye. Uthando lwezothando luzokuvumela ukuba unambitha ukunambitheka kokuphila. Ngenxa ye-Mars eLibra engxenyeni yokuqala yonyaka, uzobe uthatha isikhathi eside uxoxisana nabangani bakho ngezicucu ezithile, bese usenza ngokungazenzisi, ulalele umfutho. Ngakho-ke, izinqumo ezibaluleke kunazo zonke zithathwa kahle noma zithathwe ngomuntu onokwethenjelwa, noma zihlehlisele emkhakheni wesibili wonyaka. Kusukela ekupheleni kukaJulayi, umsebenzi omningi uzodinga ukunakwa okwengeziwe. Khombisa ukuthi unempilo yakho futhi uzimisele kangakanani emisebenzini esemthethweni, uzobonakala uzimisele ukusebenzisa ngokunenzuzo kwakho, intshiseko nokwethemba.
Wazalwa kusukela ngoFebhuwari 20 kuya kuFebruwari 28.
Uzophishekela isifiso sokuthola indlela yakho kanye nenjongo yokuphila. Ngezinye izikhathi kuyoba nomuzwa wokungaqiniseki futhi ujikeleze emoyeni. Hlala ngokwakho, uthuthukise amakhono akho, uhlakulele u-halo wemfihlakalo, usebenze esithombeni. Uzosekelwa ngobuciko, ukuzindla nomthandazo. Kusukela ngoJulayi kuya kuSepthemba - isikhathi sokusebenza embukisweni wamaphupho.
Wazalwa kusukela ngomhlaka-1 kuya ku-10 Mashi.
I-Charon izokusiza ukuba uvumelane kalula nanoma iziphi izimo futhi ukhuthaze ukuzethemba kubantu. Uma kunesimo esibili, isipho sokubona kwangaphambili sizosiza. Kusukela ngoJanuwari kuya kuMeyi ungakwazi ukukhokhela injabulo eminingi yokuphila. Kusukela ngoJuni kuya kuSeptemba, inhlanhla izohambisana nekhono eliphikisayo futhi eliphikisanayo.
Wazalwa kusukela ngomhlaka-11 kuya ku-20 kaMashi.
Qinisekisa ukuthi uhamba futhi uzimisele ukuhamba ngaphezu kwemibono yakho ngamakhono akho. Inhlanhla izoba mnandi kuwe. Yonke imibukiso yakho ngoJanuwari noFebruwari ibona ngobuciko. Kusukela ngoMeyi kuya kuJulayi, sebenza ngokuzethemba ukuze unqobe izivimbe ezingokwengqondo ezikuvimbela ekufinyeleleni umgomo wakho.
Uzozama ukuhlanganisa ukuphila komuntu siqu okuqhakazile nokuqiniswa okuhleliwe kokuzinza kwezezimali.
Umzabalazo ovulekile kanye nenselele kulo nyaka akuyona indlela yakho. Ukuze ungabi nciphisa amandla, qeda imisebenzi ebalulekile ngezigaba eziningana. Engxenyeni yokuqala yonyaka, ukufutheka komunye nomunye kuzothatha izinguquko eziqakathekile empilweni yakho. Phakathi nalesi sikhathi i-Mars ingakusiza ukuba uhlele izinhlelo ezingacabangi. Engxenyeni yesibili yonyaka, ukukhiqiza kwakho kuzokwandisa kakhulu. Noma kunjalo, yonke imizamo yokwandisa igunya labo izobhekana nokuphikiswa. Kusukela ngoJuni kuya ku-Okthoba, uzokwenza ngokwengeziwe ngamabomu, ngakho-ke ngokusebenza kahle.
Isidingo sakho sokuzivuselela sizohlanganiswa nekhono lokusebenza eqenjini, ngenkuthalo ukuhlanganisa imisebenzi evamile. NgoJanuwari nangoFebruwari kuzodingeka balahle izinkolelo nemicabango. Engxenyeni yesibili kaSeptemba, ungagqugquzeli ngokwakho, ikakhulukazi enkonzweni.
Izinga lokuphila liyokhula kakhulu kangangokuthi ngezinye izikhathi kufanele uzithole ezindaweni ezimbili ngesikhathi esifanayo. Ingxenye yokuqala yonyaka izokulethela inhlanhla emkhakheni wama-amorous. Ukufeza ukuqaliswa emsebenzini nokuphumelela kanye nokuqala kuzoba lula kusukela ngoJuni kuya kuSeptemba.
Kusukela ngoJanuwari kuya kuMeyi nango-Okthoba-Disemba, sinqume ngomsebenzi obaluleke kakhulu futhi ucele usizo lwabalingani beqembu, uqondise yonke imizamo yokuqalisa ukusebenza kwayo. Intuition kanye fortune kuyoba abasizi abakhuthele.
Bonisa izici ezahlukene zemvelo yakho
Yiba ngokwakho, ungayeki izimiso zakho. Zama ukuphelela okungokomoya. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ubuyekeze umhlaba jikelele futhi ube nethonya elihle kuzo zonke izindawo zokuphila.
Ububele bakho obuhle kanye nesifiso sokuvumelana nobuzwe obuthakathaka buzoheha abadumile nabachwepheshe besifazane. Abaningi babo bazoba ngabantu abahlakaniphile noma amadoda acebile. Kusukela ngoJanuwari kuya kuJulayi uzoba nokuphila komphefumulo okhukhumele, okunamandla: awusoze walahlekelwa yindoda, noma izipho eziphakade. Le nkathi izokhunjulwa ngenzwa yesimo esikhethekile kanye nokuhlolwa okunamandla esiteshini esiseduze. Kodwa-ke, injabulo yomzimba ngeke ithathe isikhundla sakho sokuxhumana nomzwelo okugcwele kanye nobuhlobo obungokomoya. NgoJanuwari-Febhuwari futhi phakathi noJuni, okudlule kuzokukhumbuza wena: ekugcineni kuyoba nesoka lesikhathi esidlule, noma uzokwazi ukudweba umugqa ngaphansi kobudlelwane obungapheli. Emibunyeni yezivumelwano zonyaka ozayo kuzoba nokuzinza, ukungabi khona kwezimangalo ezithandanayo. Kodwa ngoFebhuwari, ngoJuni, ngo-Okthoba, umsebenzi uqinisa ukuqonda okubili phakathi kwabo.
Lo nyaka awulindelekile imicimbi e-grandiose noma amaphuzu okujika. Isihloko esiyinhloko kuzo zonke izindlu sizobe sikhathazekile ngokuqiniswa kokuqinisa isabelomali somndeni. Ngomlingani wakho, uyathandwa futhi uyathandwa, uzozama ukuba nguwe konke ukusekela, kodwa uzodinga usizo lwakho. NgoJanuwari-Februwari, isizukulwane esincane sizozama ukuhlola isineke sakho nemingcele yalokho okuvumelekile. Noma kunjalo, uzoba nokuhlakanipha okwanele nokukhuthazela ukuze ubatshele izimiso zokuziphatha eziyinhloko. Kusukela ngoJanuwari kuya kuJune - isikhathi esibalulekile sokuvumelanisa ubudlelwano nabazali.
Izincomo zabangani kulonyaka zizodlala indima ebalulekile kuwe. Ngenxa yethonya likaPluto, ungakwazi ukuzungezile nabantu abafana nomuntu nabaxhasayo, ngokuzithoba ukuzwa izidingo zangempela zomuntu wonke. Uzokhangwa kubantu abangavamile nalabo abafuna ukusondelana nobuntu obuqinile. Uzoba umholi walo mbuthano. Engxenyeni yokuqala yonyaka, izimo zokuphila ezingacacile zizosiza ukukhula nabantu abangabani emgwaqeni. Ekusebenzelaneni nabangane, kubalulekile ukulondoloza ukwethembeka, ubulungiswa kanye nemithwalo yemfanelo. Kusukela ngoMashi kuya kuNovemba, gwema ukuzethemba ngokweqile nokuvuleka emsebenzini. NgoDisemba, mhlawumbe ukungaboni kahle nomngani wakho omkhulu.
Khumbula ukubusa kwe-golden mean
Amathuba okuqaqa isisindo mkhulu. Ebusika, isifiso esingalawuleki singavuka, futhi kusukela ekupheleni kukaJulayi uzovame ukujwayela ukuhlukunyezwa. Ngokuvamile, kulo nyaka kuyoba nzima ukugcina umgomo ekukhethweni kwemikhiqizo yezempilo, ukhetho lokudla, njll. Ngakho-ke, funa usizo ochwepheshe, kuhlanganise nezindlela ezingezona zendabuko. Uma ungafundi ukuphumula nokuphumula ngezikhathi ezithile, ukulayishwa okuhlelekile kwesimiso sezinzwa kugcwele izifo. Kusukela ngoMashi kuya kuNovemba kunengozi yokulimala ekhaya. Kusukela ngo-Ephreli kuya kuJuni, ukuhlinzeka esibhedlela noma ukungenela okuhlinzekwayo kungenzeka, ngakho qaphela noma yiziphi izimpawu. Engxenyeni yesibili yonyaka, amathuba okukhushulwa komfutho wegazi ophakeme, izifo zesibindi kanye ne-pancrea ziyanda. Ukwenza imidlalo kuzoba usizo olukhulu emzimbeni wakho.
Isihluthulelo sempumelelo yimpumelelo
Okubaluleke kakhulu emisebenzini yakho kuyoba isimiso samahhala. Siyabonga u-Uranus ezindabeni zezezimali, uzovame ukuthembela ekugqibeleni kwangaphakathi. Izisebenzi ezingavamile, ezintsha kanye nokuzikhethela ezihlobene nokuhlakanipha kanye nokucabanga kuzoletha izinzuzo ezibalulekile, ikakhulukazi engxenyeni yesibili yonyaka. Kuzodingeka ukuthi ube nesineke, isimo sezimali esizinzile ngeke siphumelele ngokushesha, kodwa ngenhloso yokuzikhandla kanye nemigomo. Umlingani wakho uzokusiza ukuthi uthole imali eyengeziwe noma ube ngumxhasi wakho. Kusukela ngoJanuwari kuya kuJulayi, gwema ukunganaki ngemali yabanye abantu, ngoba ingozi yemiphumela engajabulisayo inhle. Kusukela phakathi kukaFebhuwari uzobona ukuthi injabulo ayikho emalini. Kubalulekile ukwakha isimo sengqondo esifanele kubo: ukufunda ukubala nokuwasabalalisa ngokufanele, kodwa ukugwema ukuqoqwa nokukhulekela. Kule ndlela kuphela ukugeleza kwezimali kuzolingana futhi kugcwalise. Kusukela ngoMashi kuya kuNovemba, imisebenzi esemthethweni ingabangela ukuphikisana kwangaphakathi. Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi okushiwo ozakwabo, akufanele ukuletha isimo sesiphetho, ngoba ngokuhamba kwesikhathi uyozisola. Kuze kube sekupheleni kukaJulayi, noma yikuphi ukutshalwa kwezimali okuyinhloko ngeke kuvinjelwe ngokuqapha okukhethekile. UJanuwari, u-Ephreli, uMeyi, ngoJulayi abahlukumezi ngezezimali.
I-Horoscope ngo-September 2017 yabesifazane-i-Pisces
I-Horoscope ye-Scorpio-Abesifazane ngo-February 2017
Izimpawu Zonyaka WeNyoka Yamanzi Amnyama
Indlela yokuhlanza ubuso bamachashazi amnyama ekhaya
Ilayisi nenyama ngesiShayina
Imidlalo engeyona yezingane: ithonya lamathoyizi anamuhla on psyche yezingane
Ukunakekelwa kwezokwelapha ekhaya: kuphi ukuthola udokotela onolwazi?
Rigatoni ngesibindi no-anyanisi
Ukunakekela ama-orchid ekhaya
Ukushayela nge-apulame ye-caramel
Amakhukhi wekhofi nama-chocolate "I-Zebra"
Izitayela zezinwele zamantombazane e-prom
Ukuphulukisa izakhiwo zomnyama omnyama we-ash ash